​कुन मन्त्रीको नाममा कति छ सेयर ?
Tuesday,3Jan, 2017 12:37 PM
काठमाडौं, १९ पुस । सरकार गठन भएको ४ महिनापछि मात्रै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि कतिपय मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकूत सम्पत्तिको स्रोत ससुरालीले दिएको दाइजो भनेका छन् । दाहाल सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दैआएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ६० तोला सुन र १ सय ५० तोला चाँदी दाइजोबाट प्राप्त भनी देखाएका छन् । दाइजो लिनु कानुन विपरीत भनिएकाले मन्त्रीहरुले सम्पत्तिको स्रोत दाइजोमा प्राप्त भनी देखाएकोमा महिला अधिकारकर्मीहरुले सामाजिक संजालमै विरोध गर्दैआएका छन् । मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा सेयर पनि देखाएका छन् । तर त्यो सेयर कुन बैंक वा वित्तीय संस्थामा हो भन्ने खुलाइएको छैन । पदको दुरुपयोग गरी कमाइएका यस्ता सम्पत्तिका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नुपर्ने आवाज जनताले उठाएका छन् ।
सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणअनुसार, सबैभन्दा बढी सेयर राप्रपाबाट भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्री भएका बिक्रम पाण्डेको देखिएको छ । सबैभन्दा कम सेयर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकको नाममा २४ हजार रुपैयाँ बराबरको छ । मन्त्रीहरुको मंसिर २९ गते सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमा मन्त्री पाण्डेको नाममा ५२ करोड रुपैयाँ सेयर रहेको उल्लेख छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी सेयर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनको छ । पर्यटनमन्त्री शाहीले ८ करोड रुपैयाँको सेयर देखाएका छन् । केही बर्षमात्र पाइलटको जागिर खाएर शाहीले ८ करोडको सेयरदेखि काठमाडौंमा १५ रोपनी जग्गा र घरहरु कसरी जोडे भन्ने प्रश्न कांग्रेस कार्यकर्ताले नै गर्न थालेका छन् । कर्णालीकै एक कांग्रेस नेताले भने, भगौडा पाइलटको यति धेरै सम्पत्ति कहाँबाट आयो, स्रोत खोजी हुनुपर्छ ।
सर्वहारावर्गको उन्नति गर्ने भन्दै जनताका छोराछोरीलाई युद्धमा होम्ने हजारौं निहत्था जनताको हत्या गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री भएका जनार्दन शर्माले ५० लाख कित्ता सेयर रहेको सम्पत्ति विवरणमा देखाएका छन् । तर त्यो कति रकमको हो भने खुलाएका छैनन् । एक सेयर विश्लेषकले भने, स्ट्यान्डर्ड चार्टड र एभरेष्ट बैंकको हो कि युनिलिभर वा वीमा संस्थानको हो, त्यो खुल्न सकेको छैन । एक कित्ता बराबर सरदर १ हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि मन्त्री शर्माको नाममा ५ करोड बराबरको सेयर हुन्छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टड र एभरेष्ट बैंकजस्ता संस्थाको हो भने १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको हुन्छ । यसैगरी आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहराको नाममा २ करोड रुपैयाँ सेयर छ ।
त्यस्तै प्रचण्ड सरकारका परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नाममा डेढ करोड बराबरको सेयर देखाइएको छ । सेयर विवरण देखाउने पाँचौं नम्बरमा देखिएका छन्, युवानेता तथा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा । उनको सम्पत्ति विवरणमा ७३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर रहेको उल्लेख छ । गगन थापाले विभिन्न बैक तथा कम्पनीमा खरिद गरेको सेयरको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न कांग्रेस वृत्तमा उठेको छ । थापासँग कम्पनीको कुल ३ हजार ५४४ कित्ता शेयर रहेको विवरणमा उल्लेख भएको छ । केही दिनअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण भन्दा स्वास्थ्यमन्त्री थापाको जायजेथा भिन्न रहेको देखिन आएको हो ।
उनको सवैभन्दा बढी सेयर आमा रामेश्वरी थापा र बुवा महेन्द्रबहादुर थापाको नाममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा छ । उनले बुवा आमाको नाममा ७ सय ३५ कित्ता सेयर रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
थापाले आफूसहित बुबा महेन्द्र, आमा रामेश्वरी, श्रीमती अञ्जना र छोरीहरुको नाममा सेयर रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । तलब नलिने, बिहे खर्चको पैसा पाटन अस्पतालमा दिने घोषणा गरेका मन्त्री थापाको त्यत्रोविधि सेयर कहाँबाट आयो भनेर कांग्रेस कार्यकर्ताले जिब्रो टोक्न थालेका छन् ।
त्यसपछि कांग्रेसबाटै मन्त्री भएका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड सेयर कारोबारमा छैटौं नम्बरमा देखिएका छन् । उनको नाममा ७० लाख रुपैयाँको सेयर रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । बाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकालीसँग २० लाख कित्ता सेयर रहेको छ भने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीको नाममा २० लाख बराबरको सेयर रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री मन्त्री हितराज पाण्डेसँग ११ लाख रुपैयाँको सेयर छ । धनीराम पौडेलको ४ लाख रुपैयाँको सेयर छ । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग २ लाख १६ हजार रुपैयाँको सेयर रहेको छ । पदको दुरुपयोग गरेर कमाएको कालो धनलाई सेतो बनाउन राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताले शेयरमा लगानी गर्दै आएको पुष्टि पनि यो सम्पत्ति विवरणले गरेको छ । शेयर बजार यस्तो क्षेत्र हो जहॉ दिनहुँ अर्बौको कारोबार हुन्छ, तर त्यसको स्रोत खोजिदैन । त्यही भएर पनि भ्रष्टाचा गरेको सम्पत्ति शेयर बजारमा लुकाउन सजिलो हुन्छ ।
जनता बैंकको खुद नाफा ५१ प्रतिशतले बढ्यो
​बुद्ध एयरले नयाँ विमान एटिआर–७२ ल्याउँदै
सन्राइज बैंकको स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी
रामेछापको मन्थलीमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको ३४औँ शाखा
​बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को खतरा